आज रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो जात्रा देखाइने | Seto Khabar
महाशिला गाउँपालिकको अध्यक्ष उपाध्यक्षमा नेकपा एमाले विजयी
रमेश खरेल नेतृत्वको नेपाल सुशासन पार्टीको वडा अध्यक्षमा जित
टीकापुरका तीन वडामा माओवादी केन्द्रको सानदार जित
बालेनलाई १० हजार ८ सय भन्दा बढी मत
पाँचखपन प्रमुखमा काँग्रेस, उपप्रमुखमा एकीकृत समाजवादी विजयी
जनताले एउटा खराबले जितेको ठाउॅमा अर्को खराबलाई भोट हाल्नु दुखद : डा. बाबुराम भट्टराई
शारदा नपामा काँग्रेस, कपुरकोटमा समाजवादी विजयी
सिन्धुपाल्चोकका कुन पालिकामा को विजयी ?
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्र
दोब्बर भन्दा बढि मतले ललितपुरमा चिरीबाबुको अग्रता
रेणु मतान्तर बढाउदै, विजय पछिपछि
बालेनले १० हजार मत कटाए
आज रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो जात्रा देखाइने
२०७४ जेष्ठ ११, बिहिबार (४ साल अघि)
काठमाडौँ, ११ जेठ । वर्षा र सहकालका देवता रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो आज देखाइने भएको छ । सो अवसरमा सरकारले आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिएको छ ।
वर्षा र सहकालसँग जोडिएको रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो जात्रा प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । यो जात्राको सुरुआतका विषयमा विभिन्न किंवदन्ती छन् । एउटा किंवदन्तीअनुसार नागराज कर्कोटककी रानी आँखा नदेख्ने रोगले पीडित भइन् । उपचारका लागि वैद्यको खोजीमा कर्कोटक आफैँ निस्कनुभयो ।
वैद्य खोज्ने क्रममा खेतमा काम गरिरहेका किसानले उपचार गर्न सक्छन् भनी पाताल लगियो । किसानले आफ्नो हातको मयलले कर्कोटककी श्रीमतीको अन्धतासम्बन्धी रोग निको पारे । नागराजले किसानलाई सुन, हीरालगायत बहुमूल्य धातु जडित भोटो दिएर पठाए । किसान खेतमा काम गर्दा यो भोटो फुकालेर राख्थे ।
रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्रा चलिरहेका बेला एक दिन भूतजस्ता देखिने एक व्यक्तिले भोटो दाबी गर्न थाले । किसान र ती व्यक्तिका बीच भोटोको स्वामित्वका विषयमा विवाद सुरु भयो । यो विवाद त्यो बेलाका राजा वरदेवसम्म पुगेको रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने साइत हेर्ने परिवारका सदस्य एवम् नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य कीर्तिमदन जोशीले बताउनुभयो ।
विवादका समयमा कर्कोटक नाग आफैँ उपस्थित भई भोटो रातो मत्स्येन्द्रनाथलाई जिम्मा लगाइएको उहाँको भनाइ छ । त्यस बेलाका राजा वरदेवले दशी प्रमाणसहित आउनेलाई भोटो दिने निर्णय सुनाउँदै आफैँले तीनपटक देखाउनुभएको थियो । यही विश्वासमा प्रत्येक वर्ष यो जात्रा चलाउन थालिएको हो । भोटोको स्वामित्वको विवाद भएका बेला यात्रा ललितपुरको जावलाखेलमा चलेकाले त्यहीँ भोटो देखाइन्छ ।
यो जात्रा वरदेवको शासनकाल विसं ६६२ देखि सुरु भएको विश्वास गरिन्छ । अनिकाल लागेर रातो मत्स्येन्द्रनाथलाई उपत्यकामा भित्र्याउने राजा गुणकामदेवका नाति, नरेन्द्रदेवका छोरा वरदेवको पालादेखि भोटो देखाउने जात्रा सुरु भएको जोशीको भनाइ छ ।
भोटो जात्रा हेर्न राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् पदाधिकारीलगायत मन्त्री, सांसद र सरकारी अधिकारीको पनि जावलाखेलमा उपस्थिति हुन्छ ।
उपत्यकाका सबै मानिस भोटो जात्रा हेर्न एवम् दशी प्रमाणसहित दाबी गर्ने उद्देश्यले जावलाखेलमा जम्मा हुन्छन् भन्ने विश्वासमा यस दिन उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने चलन बसेको हो ।
वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात् अक्षय तृतीयाका दिन गो दान गरी भोलिपल्ट वैशाख शुक्ल चतुर्थीका दिनदेखि रथ तान्ने परम्परा छ । पहिलो दिन रथ गाःबहालसम्म पु¥याइन्छ । गाःबहालदेखि रथ मङ्गलबजारसम्म पु¥याइने गुठी संस्थान ललितपुरका कार्यालय प्रमुख बैकुण्ठ आचार्यले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
यसपछि मङ्गलबजारबाट रथ तानेर सुन्धारासम्म पु¥याइन्छ । एक दिन रथ सुन्धारामा राखेर अर्को दिन चक्रबही लगिन्छ । चक्रबहीबाट रथ तानेर लगनखेलमा पु¥याइन्छ । रथलाई लगनखेलमा एक दिन राखेर महाबलिसहित पूजा गरिन्छ ।
“लगनखेलमा राँगा, थुम्बा, हाँस, माछा र बोकाको बलि दिएर रातभर पूजा गर्ने परम्परा छ, त्यसको भोलिपल्ट लगनखेलबाट रथ तानी लगनखेल र थटीटोलका बीचमा पु¥याइन्छ, यहीँ नरिवल खसालिन्छ, यहाँबाट महिलाले रथ तानेर थटीटोल पु¥याउने परम्परा छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
रथ थटीटोलमा पुगेपछि साइत हेरेर अघि बढाइन्छ । राजा गुणकामदेवका पालामा १२ वर्षसम्म अनिकाल भएपछि कामरुप कामाक्षबाट मत्स्येन्द्रनाथलाई नेपाल ल्याइएको किंवदन्ती छ । एक हजार ४०० वर्षअघि मत्स्येन्द्रनाथलाई ल्याएपछि वर्षा भई सहकाल सुरु भएको विश्वास रहिआएको छ ।
चार मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन
आज भदौ १२ गते शनिबार कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् ! राशिफल
बाँकेमा बाढी र डुबानबाट हुने जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी
साउनमा पनि अर्जुनधाराधामको मुख्य मन्दिर खुला नहुने
५ महानगरमा कहाँ कस्को अग्रता ?
एक महिनामा १९ अर्ब बैंकबाट बाहिरियो
आज राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदै, के गर्न पाइँन्छ ? के पाइँदैन ?
श्रीलंकामा हिंसात्मक झडप, प्रदर्शनकारीद्धारा राजपाक्षे परिवारको घरमा आगजानी
निर्वाचनको मौका छोपी मूल्यवृद्धि
वैशाख ३० गते सार्वजनिक बिदा
शिक्षण संस्थामा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन गर्न अन्योल
आज बैशाख २७ गते मंगलबार , कस्तो छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् ! राशिफल